Kedu ihe bụ RFM nke Blog gị? | Martech Zone
Na ọrụ m ga-eme webinar n'izu a. Isiokwu ahụ adịla n’uche m ogologo oge tupu arụ ọrụ maka Compendium Blogware. N'oge mbido ọrụ ahịa data m, enyere m aka ịmepụta ma mepụta ngwanrọ nke ga - enyere ndị na - ere ahịa aka ịkọwapụta ndị ahịa ha.
Ebumnuche ahụ anaghị agbanwe agbanwe, ruo oge ụfọdụ ọ bụ maka ihe niile nlọghachi, ugboro ole na uru ego. Dabere na ịzụ ahịa nke onye ahịa, ị nwere ike imetụta omume ha site na iji ngalaba ndị a zụrụ ha ahịa nke ọma.
Ntughari, Ugboro na Ego Bara Uru:
Adịbeghị anya ahịa nwere ike ị nweta nleta ọzọ ma ọ bụ ịzụta - yabụ ha bụ atụmanya dị ukwuu. Nwere ike ịchọpụta nke a dị ka onye na-azụ ahịa, ị ga-enweta ụyọkọ nkwukọrịta ahịa na katalọgụ mgbe ị zụrụ ụlọ ọrụ - wee laa. Mgbe ụfọdụ, ha na-atụfu na a dere ma ọ bụ ego. Ihe niile bu iji bulie ego ha nwetara site na ntughari mbu.
Ndị ahịa mgbe niile ndị ude nke ihe ubi, na gị zuru okè lekwasịrị maka upsell ohere. Ebumnuche ya na ndị ahịa na-azụkarị ahịa na-etokarị uru ọ bụla erere. Nke a nwere ike too eto eto gị.
Ndị ahịa bara uru dabere na ego ole ndị ahịa gị na-emefu gị site n'oge ruo n'oge (oge dabere na azụmahịa gị na ụlọ ọrụ gị). Bara uru na-enye gị nghọta nke onye 'nkezi' ahịa bụ, onye nwere ike ahịa ka inupụ ha nkezi elu… na onye nwere ike utịp n'ihi ịbụ ihe n'elu nkezi ahịa.
Ọ bụrụ n’ịnweghị iji usoro a ekewapụta ndị ahịa gị, ịkwesịrị ịdị!
Search engines yiri nná »á» otgmento ha segment… er… á »ná» your gá »‹ website ma á »bá» blog blog. Ighaghachi ọdịnaya gị, ọnụọgụ nke ọdịnaya gị na uru ọdịnaya gị bụ ihe bụ isi na igwe nchọta ihe.
Adịbeghị anya ọdịnaya - Google hụrụ ọdịnaya na-adịbeghị anya. Amaghị m ihe nzuzo nke Google algorithm mana ọ bụghị ihe ijuanya na akwụkwọ ochie m na-adị ka ọ na-agwụ ike ma ọhụụ ọhụrụ na-ebili na ogo - ọbụlagodi mgbe ọdịnaya ahụ yiri nke ahụ.
Ugboro ọdịnaya - Nkọwapụta Google na nyocha saịtị gị mgbe ị biputere. Google bots lelee saịtị gị mgbe mgbe, ọbụnakwa mụbaa ugboro ole edepụtara saịtị gị dabere na mgbanwe ugboro ugboro na saịtị gị. Ide ihe ugboro ugboro na-enyere aka ịkụzi bọọlụ maka ugboro ole ịlaghachi (saịtị ndị na-arụ ọrụ nwere ụda nke ọdịnaya ndị ọrụ na-edepụta aha mgbe mgbe, yana, n'ụzọ dị ịtụnanya, kwalite nke ọma).
Ugboro ọdịnaya na-akpụkwa ikpo nke ọdịnaya maka Google ịmalite ịghọta ihe saịtị gị gbasara. Ọ bụrụ na m dee nnukwu post taa banyere nlaazu ahụ, saịtị akụ na ụba nwere otu ọkwa na mkpa ga-egosi nke dị elu karịa nke m ga-eme n'ọkwa. Nke ahụ abụghị ihe ijuanya, ọ bụ?
Uru Ọdịnaya - Google jiri mkpa ọdịnaya gị rụọ ọrụ na peeji nke ejiri isiokwu ndị ị kwuru wee mepụta ya peeji nke site na isiokwu ndị ejiri ya mgbe ị na-atụgharị saịtị gị ma ọ bụ blọọgụ gị. Ide ederede karia ihe ndi ozo na enye ezi nma iji backlink na ya, yabụ saịtị ndi nwere otutu ihe di nma nwere otutu otutu backlinks na; n’ihi nke a, kwalite nke ọma.
Dị ka ị na-eche na saịtị gị ma ọ bụ blog n'izu a, na-eche etu ị ga - esi metụta okporo ụzọ ọchụchọ gị… chee onwe gị dịka onye ahịa nke Google. Mee ka saịtị ma ọ bụ blọọgụ gị dịkwuo mma site na itinye uche na RFM gị. Dee ugbu a, dee ugboro ugboro ma dee nnukwu ọdịnaya.
Tags: Amazon Web Servicesb2b ahia benchmark reportb2b ahịa benchmarknsonaazụ azụmahịagwtahịa benchmarkụgwọ ọrụ mmemmesalesforce.comchọọ mojoSlider
Ọ na-eju m anya mgbe ọ bụla m tinye ntinye blog n'etiti 6-7 AM, site na etiti ụbọchị ha nọ na peeji mbụ nke nsonaazụ ọchụchọ na Google maka isiokwu na aha ntinye aha blog.
Ihe ị kwuru n'ime ya bụ ego.
Mar 12, 2009 na 2: 02 PM
hey Doug… M mụtara banyere nke a na m eBusiness klas na Monday na ọ bụ ụzọ na-adọrọ mmasị iji lelee blog gị. Amaara m na m ga-ede n'abalị a ma hụ otú nke ahụ si aga.
Mar 12, 2009 na 5: 39 PM
Daalụ Duane! Daalụ maka ịbụ nnukwu onye na - agụ ihe - ị na - eso blọgụ m ruo nwa oge ma enwere m ekele maka ya. Mee ka m mara ma m nwere ike imere gị ihe ọ bụla n’ọdịnihu.